“Star Tour” any Mahajanga: lasa fetibe ho an’ny mpianakavy | NewsMada
“Star Tour” any Mahajanga: lasa fetibe ho an’ny mpianakavy
Miitatra hatrany. Tsy “THB Tour” fotsiny intsony fa hivelatra ka lasa “Star Tour” ny hetsika hotontosaina any Mahajanga, ny 18 hatramin’ny 20 aogositra ho avy izao. Mazava loatra fa ao anatin’ny fialan-tsasatra toy ny mahazatra ihany, saingy lasa fetibe ho an’ny mpianakavy izany amin’ity andiany ity.
Nilamina rahateo ny disadisa, ary niarahan’ny kaomininan’i Mahajanga sy ny Star namolavola ny fandaharam-potoana, mba hampifaliana ny mpianakavy, na tompon-tany izany na vahiny tonga hiala sasatra.
Hizarazara amin’ireo toerana malaza ao Mahajanga ny hetsika, eny amin’ny “Bord” ny andiam-pampisehoana, izay hosantarin’i D’Alvis sy i Nina’s, ny zoma alina. Hitohy amin’ny “carnaval” goavana izany ny asabotsy, handraisan’ireo mpianatra, fikambanana, sns, anjara. Ny hariva kosa, hiaka-tsehatra ny G5, arahin’ny salegin’i Jaojoby. Hanokatra ny tontolo andron’ny alahady kosa ny “Marathon Eau Vive”. Hamarana ny andiam-pampisehoana ny hariva ry Rak Roots sy ny tarika Ambondrona, arahin’ny fandefasana afomanga.
Hanokanana toerana koa ireo ankizy, izay ahitana karazan-kilalao maro mandritra ireo telo andro ireo. Hisy koa ny fanentanana isan-karazany eny amin’ny torapasiky ny Grand Pavois, ka hiantsoroka izany ny tarika Fou Hehy.
Mba hisorohana ny mety ho fanakarontanana, hamafisina ny fandriampahalemana amin’io, amin’ireo toerana rehetra ireo. Nifanarahana ihany koa fa hisy ny fanadiovana ny torapasika ny alahady hariva, arahin’ny fanadiovana faobe vantany vao vita ny “Star Tour”.